FFP2 မျက်နှာဖုံးပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ - China FFP2 မျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်သူများ
သွင်ပြင်လက္ခဏာများ： ၁.၃D လူသားဒီဇိုင်းသည်မျက်နှာနှင့်ကိုက်ညီပြီးလေထုယိုစိမ့်မှုမှကာကွယ်ရန်နှာခေါင်းကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်နားများ ၄။ သီးခြားထုပ်ပိုးပြီးထပ်ခါထပ်ခါအသုံးပြုရန်ပိုမိုလုံခြုံသည်။ 1PCS / OPP, 50PCS / BOX, 12BOX / CTN, 600PCS / CTN ၅။ မမြင်နိုင်သောပလတ်စတစ်နှာခေါင်းတံတားညှပ်၊ မတူညီသောနှာခေါင်းတံတားပုံစံများ၊ လုံခြုံမှုကာကွယ်မှုနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန်။ လျှောက်လွှာ ၁ ခု
ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက် 1. Welcom OEM & ODM ။ 2. စက်ရုံစျေးနှုန်းအလယ်အလတ်ကွာခြားချက်မရှိပါ။ ၃။ အရည်အသွေးကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံ၊ စတိုင်၊ ပုံစံ၊ ဒီဇိုင်းစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ ၆ ။ ၇ ။ ၈။ "Quick Response" နှင့်ရောင်းချပြီးနောက်ကောင်းသော ၀ န်ဆောင်မှု။ ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအလုပ်ရုံ： ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်သဘောင်္： ငွေပေးချေမှုကာလ: သင်သည် T / T မှတစ်ဆင့်အမှာစာအတွက်ငွေပေးချေနိုင်သည်။
com ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက် ၁ ။ Welcom OEM & ODM ။ 2. စက်ရုံစျေးနှုန်းအလယ်အလတ်ကွာခြားချက်မရှိပါ။ ၃။ အရည်အသွေးကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံ၊ စတိုင်၊ ပုံစံ၊ ဒီဇိုင်းစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ ၆ ။ ၇ ။ ၈။ "Quick Response" နှင့်ရောင်းချပြီးနောက်ကောင်းသော ၀ န်ဆောင်မှု။ ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအလုပ်ရုံ： ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ပို့ဆောင်ခြင်း： ၁။ နမူနာများအတွက် FedEx / DHL / UPS / TNT, Doo ...
ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက် 1. Welcom OEM & ODM ။ 2. စက်ရုံစျေးနှုန်းအလယ်အလတ်ကွာခြားချက်မရှိပါ။ ၃။ အရည်အသွေးကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံ၊ စတိုင်၊ ပုံစံ၊ ဒီဇိုင်းစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ ၆ ။ ၇ ။ ၈။ "Quick Response" နှင့်ရောင်းချပြီးနောက်ကောင်းသော ၀ န်ဆောင်မှု။ ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအလုပ်ရုံ： ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ပို့ဆောင်ခြင်း： ၁။ နမူနာအတွက် FedEx / DHL / UPS / TNT၊ တစ်အိမ်မှတစ်အိမ် ၂ ...
ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက် 1. Welcom OEM & ODM ။ 2. စက်ရုံစျေးနှုန်းအလယ်အလတ်ကွာခြားချက်မရှိပါ။ ၃။ အရည်အသွေးကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံ၊ စတိုင်၊ ပုံစံ၊ ဒီဇိုင်းစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ ၆ ။ ၇ ။ ၈။ "Quick Response" နှင့်ရောင်းချပြီးနောက်ကောင်းသော ၀ န်ဆောင်မှု။ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း： ငွေပေးချေမှုကာလ: သင်သည် T / T, Ali Trade Assurance, Wes မှတစ်ဆင့်အမှာစာအတွက်ငွေပေးချေနိုင်သည်။
သွင်ပြင်လက္ခဏာများ： ၁.၃D လူသားဒီဇိုင်းသည်မျက်နှာနှင့်ကိုက်ညီပြီးလေထုယိုစိမ့်မှုမှကာကွယ်ရန်နှာခေါင်းကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်နားများ ၄။ သီးခြားထုပ်ပိုးပြီးထပ်ခါထပ်ခါအသုံးပြုရန်ပိုမိုလုံခြုံသည်။ 1PCS / OPP, 50PCS / BOX, 12BOX / CTN, 600PCS / CTN လျှောက်လွှာ - ၁။ ဆောက်လုပ်ရေး၊ သတ္တုတွင်း၊ အထည်အလိပ်၊ ကြိတ်ခွဲခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ စက်ရုံအလုပ်ရုံ၊ SPAs၊ ဆေးရုံများ၊ ဆေးခန်းများ။
သွင်ပြင်လက္ခဏာများ： ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအလုပ်ရုံ aging ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်သင်္ဘောတင်ခြင်း： ၁။ နမူနာများအတွက် FedEx / DHL / UPS / TNT၊ တစ်အိမ်မှတစ်အိမ် ၂။ လေယာဉ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ပင်လယ်ရေကြောင်းဖြင့်ဖြစ်စေ FCL အတွက်သုတ်ခြင်းကုန်ပစ္စည်းများအတွက်; လေဆိပ် / ဆိပ်ကမ်းကိုလက်ခံရရှိခြင်း ၃။ ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့သူများသို့မဟုတ်ညှိနှိုင်းနိုင်သည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများကိုသတ်မှတ်ထားသောဖောက်သည်များ ၄။ ပစ္စည်းပို့ရန်ကြာချိန် - နမူနာအတွက် ၃-၇ ရက်၊ သုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် 5-25 ရက်။ ၅။ နမူနာပေးပို့ချိန် - DHL / UPS / TNT / FEDEX မှ ၃-၅ ရက်ဖြင့် ၆ ရက်။ အမြောက်အများမှာယူမှုသင်္ဘောတင်ချိန် - ၅ ရက်မှ ၇ ရက်အထိ Express မှ ၁၅ ရက် - ၁၅ ရက်မှ ၃၀ ရက် - အထုပ် - မူတည်သည်။ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်သည်ကိုလက်ခံသည် ...